Sports sagxadda dhulka, Wooden Gogosha PVC, Table Tennis Floor Mats - Dongxing
Dabaqa Ciyaaraha PVC
kubadda gacanta Floor
Ganacsiga PVC Dabaqa ah
qoob ka ciyaarka Floor
Table Tennis Maxkamadda
Dongxing caaga leedahay dhowr caalami ah taasoo keentay PVC, iyadoo wax soo saarka ee sannadlaha ah ee in ka badan 15 million mitir oo laba jibbaaran.
gaarsiinta Fast, mar wax soo saarka 1 maalin. ODM iyo OEM la aqbali karo. Oo dhumucdiisuna waxay ka 2mm in 12mm. Eco-friendly, 100% wax cayriin bikrad. Dhammaan alaabta dib loo isticmaali karo.
marka iibka soosaarka
Factory la aasaasay sanadkii 1996, 6 khadadka-soo-saarka, ayaa line-soo-saarka ugu dheer dunida oo dhan, 280 mitir dheer, awood maalin kasta in ka badan 50000 mitir oo laba jibbaaran.
Shahaado ISO 9001, ISO 14001, 18001 OHSAS, CE. shahaadooyinka warshadaha ansixiyey waa BWF, ITTF, duubanayaan, iwm ..
Eco-friendly, 100% PVC. awoodda Daily ka badan 50000 mitir oo laba jibbaaran, mar wax soo saarka waa 1 ama 2 maalmood, waqtiga dhalmada dhakhso ah. technology Production waa 6 jeer daahan 6 jeer lagu qalajiyo, oo dhumucdiisuna waxay noqon kartaa ka 2mm in 12mm.
Joojinta Dibad Baxsiga Kubadda Koleyga oo la hakiyey
Duubanayaan ansixiyey Maxkamadda Tennis Floor Grass Qaabka 1 ...
Traffic vinylalkohol Gogosha One Leaf Qaabka DXT-9801
PVC Sports Gogosha for Basketball Maxkamadda Maple ...
Maxkamadda Badminton Floor Crystal Sand gadaaman 1309J
ITTF shahaado Fabric Qaabka 1303R
Dabaasha Pool Gogosha Water Diamond DX Qaabka ...
Hospital Dabaqa Star Qaabka DXLD-1501
Kindergarten Qaabka Plan Floor DXG001
wax soo saarka ugu weyn ee daboolayaa sports dhexe iyo sare dhamaadka sagxadda dhulka, dhulka ganacsiga, sagxadda dhulka la deggan yahay, sagxadda dhulka gaadiidka, meged ahna bac, maqaar fadhiga, iyo maqaar gaariga.
Hebei Dongxing caaga Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 1996 ruux shirkadu "Create Olimpico caag ah, model warshadaha dhista". Shirkadda waxa uu ku yaalaa at saddexagalka dahab ah ee Beijing-Tianjin-Baoding Expressway, Zhugezhuang Industry Zone, magaalada Baoding, gobolka Hebei, Shiinaha. ku dhawaad ​​laba sano oo raasamaal Ka dib, waxa ay haatan u yahay sports keentay saaraha ah sagxadda dhulka. wax soo saarka ugu weyn ee daboolayaa sports dhexe iyo sare dhamaadka sagxadda dhulka, dhulka ganacsiga, sagxadda dhulka la deggan yahay, sagxadda dhulka gaadiidka, meged ahna bac, maqaar fadhiga, iyo Leather Car, iwm ...
Zhugezhuang Zone Ind., Xiongan New Area, Gobolka Hebei, Shiinaha
sagxadda dhulka Sports , Gym Floor Waayo, Home , PCV Sports sagxadda dhulka , Basketball caaga Floor , Gym Rubber Floor , PCV Maxkamadda Laliska ,